Mareykanka oo duqeyn ku dilay horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Mareykanka oo duqeyn ku dilay horjooge ka tirsanaa Al-Shabaab
Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku fuliyeen lagu dilay Abdirhaman Sandhere, oo loo yaqaano “Ukash”, oo ka tirsanaa horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee dagaallada ka wadda Soomaaliya.
War ay saartay ayay wasaaradda difaaca Mareykanku ku sheegtay in Sandheere “ lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo ay Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya 2dii December, laba qof oo kale oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerarkaas, kuwaas oo aan magacyadooda la garan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka.
Mareykanka ayaa duqeymo badan ka fuliyay Soomaaliya, kuwaas oo dhan ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab ee Al-Qaacidda wakiilka uga ah Soomaaliya.
Tan iyo sanadkii horem Mareykanka ayaa duqeyn ku dilay laba horjooge oo ka tirsanaa kooxda Amniyaadka eek a tirsan Al-Shabaab kuwaas oo fuliya weerarrada is-qarxinta ah, dilalka qorsheysan iyo arrimo kale.
Bishii February 3deedii ayay duqeyn lagu dilay Yusuf Dheeq, oo ka tirsanaa Amniyaadka kooxda, Sidoo kale bishoo December ayaa la dilay Tahliil Cabdishakuur oo isla kooxdaan gaarka ah ka tirsanaa, Halka bishoo September ee 2014kii la dilay hoggaamiyihii hore ee kooxda Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane.
Dilka Cabdiraxmaan Sandheere ayaa kooxda Al-Shabaab ku ah dhabar jab. Dowladda Mareykanku ay tilmaanay in ay sii wadi doonto howl-galka lagu bartilmaameedsanayo horjoogeyaasha kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacidda.
Taliyaha Booliska Cabudwaaq oo La dilay
MADAXWEYNAHA: Waa in taageerada Caalamku ay noqotaa mid dadkeena u abuureysa fursado shaqo iyo nolol’- SAWIRRO